Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.4.3.2 kenha
1.4.2 Mfe n'elu complexity
1.4.3 Ethics n'ebe nile
1.5 ndepụta nke akwụkwọ
2.3 Common e ji mara nnukwu data
2.3.1 Njirimara na bụ n'ozuzu mma maka nnyocha
2.3.2 Njirimara na bụ n'ozuzu ọjọọ n'ihi na research
2.3.2.1 -ezughị ezu
2.3.2.3 Non-anọchite anya
2.3.2.5 Algorithmically ihere
2.4.1.1 Tagzi na New York City
2.4.1.2 Ịbụ Enyi guzobere n'etiti ụmụ akwụkwọ
2.4.1.3 nnyocha nke mmadụ mgbasa ozi site Chinese ọchịchị
2.4.3.1 Natural nwere
Nka na ụzụ odide ntụkwasị
3.2 Ịjụ vs. edebe
3.4.1 gbasara nke puru omume nlele: data collection na data analysis
3.4.2 Non-puru omume samples: weighting
3.4.3 Non-puru omume samples: sample kenha
3.6 nnyocha ndị e mere jikọrọ ọzọ data
3.6.1 Amplified arịọ
3.6.2 enriched ajụ
4.5.1 Dị nnọọ na-eme ya onwe gị
4.5.1.1 Iji ẹdude gburugburu
4.5.1.2 Mee gị onwe gị na nnwale
4.5.1.3 Mee gị onwe gị na ngwaahịa
4.5.2 Onye Mmekọ ahụ dị ike na
4.6.2 Dochie, nụchaa, na Belata
5 Mass mmekota
6.2.2 Ire, Ties, na Time
7.1 N'ileghachi foward
7.2 Gburugburu nke ga-eme n'ọdịnihu
7.2.1 The agakọ nke Readymades na Custommades
Kenha ike mma atụnyere site kwachaa pụọ ikpe.
Fair atụnyere na-esi ma enweghị usoro na-achịkwa nwere ma ọ bụ eke nwere. Ma, e nwere ọtụtụ ọnọdụ ebe ị pụrụ na-agba ọsọ na ezigbo nnwale na ọdịdị enyeghị anyị a eke nnwale. Na ntọala ndị a, ụzọ kasị mma isi ike a ngosi tụnyere na-abịa. Na kenha, ndị na-eme nchọpụta anya site na-abụghị ibuo data ike ụzọ abụọ nke ndị mmadụ ndị yiri ma e wezụga na onye natara ọgwụgwọ na otu onye nwere ọ bụghị. Na usoro nke kenha, na-eme nnyocha na-n'ezie na-kwachaa; ya bụ, tụfuo ọnọdụ ụfọdụ ebe e nwere ndị mba doro anya tụnyere. N'ihi ya, usoro a ga-ọzọ n'ụzọ ziri ezi-akpọ kenha-and-kwachaa, ma Aga m arapara n'ahụ omenala okwu: kenha.
A mara mma ihe atụ nke ike nke kenha azum na oke-abụghị ibuo data isi mmalite si nnyocha na n'ji omume site Liran Einav na ibe (2015) . Einav na ibe nwere mmasị auctions ewere ọnọdụ on eBay, na-akọwa ọrụ ha, Aga m na-elekwasị anya na otu akụkụ: mmetụta nke auction-amalite price na auction ha pụta dị ka ire price ma ọ bụ ndị gbasara nke puru omume a ire ere.
The kasị ghọgbuo ụzọ zaa ajụjụ banyere mmetụta nke amalite price na-ere price ga-abụ nanị gbakọọ ikpeazụ price maka auctions dị iche iche na-amalite ahịa. Nke a na obibia ga-abụ ezi ma ọ bụrụ na ị chọghị ikwu ihe ga-ire ere price nke a nyere item ahụ a etinye na eBay na a nyere amalite price. Ma, ọ bụrụ na gị ajụjụ bụ ihe bụ mmetụta nke amalite price na ahịa ga esi nke a ọ ga na-arụ ọrụ n'ihi na ọ na-adịghị nke dabeere mma atụnyere; na auctions na ala amalite ahịa pụrụ ịbụ nnọọ iche na auctions na elu amalite ahịa (eg, ha nwere ike maka iche iche nke ngwá ahịa ma ọ bụ na-agụnye dị iche iche nke na-ere ákwà).
Ọ bụrụ na ị ama nchegbu banyere na-eme ka mma atụnyere, i nwere ike ikwu na ghọgbuo obibia na-atụle na-agba ọsọ a ubi nnwale ebe ị na-ere a kpọmkwem ihe-ekwu, a golf club-na a kapịrị set nke auction parameters-ekwu, free mbupu, auction oghe maka izu abụọ, wdg-ma na-enweghị usoro setịpụrụ na-amalite ahịa. Site n'iji dapụtara ahịa a ga esi, a na ubi nnwale ga-enye a doro nnọọ anya na-amata ọtụtụ na mmetụta nke amalite price na-ere price. Ma, nke a mmesho ga na-emetụta na otu ngwaahịa na ka nke auction parameters. The results nwere ike ịdị iche, ihe atụ, n'ihi dị iche iche nke na ngwaahịa. -Enweghị ike Ozizi, ọ bụ ike extrapolate site na nke a otu nnwale na nso nke ga-ekwe omume nwere na a gaara na-agba ọsọ. Ọzọkwa, ubi nwere na-zuru ezu dị oké ọnụ na ọ ga-infeasible na-agba ọsọ ezu nke ha na-ekpuchi dum oke ohere nke ngwaahịa na auction iche.
N'ụzọ dị iche na ghọgbuo obibia na ibuo obibia, Einav na ibe-ewe a-atọ obibia: kenha. Isi atọ ụzọ ha bụ ịchọpụta ihe yiri ubi nwere na-ama mere on eBay. Dị ka ihe atụ, Ọgụgụ 2.6 na-egosi ụfọdụ n'ime 31 Ndepụta maka kpọmkwem otu golf club-a Taylormade burner 09 Driver--ere site kpọmkwem otu seller- "budgetgolfer". Otú ọ dị, ndị a Ndepụta nwere ubé dị iche iche e ji mara. Eleven n'ime ha na-enye onye na-akwọ maka a ofu price nke $ 124,99, ka ndị ọzọ 20 bụ ndị auctions dị iche iche na ọgwụgwụ ụbọchị. Ọzọkwa, Ndepụta nwere dị iche iche mbupu ụgwọ, ma $ 7,99 ma ọ bụ $ 9,99. Ndị ọzọ okwu, ọ bụ dị ka ma ọ bụrụ na "budgetgolfer" na-agba ọsọ nwere maka nnyocha.
The Ndepụta nke Taylormade burner 09 Driver na-ere site "budgetgolfer" bụ otu ihe atụ nke a ekwekọghị set nke Ndepụta, ebe kpọmkwem otu ihe a na-eresị ndị kpọmkwem otu na-ere ákwà ma mgbe ọ bụla na ubé dị iche iche e ji mara. N'ime oke ndekọ nke eBay e nwere n'ụzọ nkịtị, ọtụtụ puku ndị ekwekọghị tent metụtara ọtụtụ nde Ndepụta. Ya mere, kama atụnyere ndị ikpeazụ price niile auctions n'ime a nyere amalite price, Einav na ibe-atụnyere nke n'ime ekwekọghị tent. Iji ikpokọta pụta si atụnyere n'ime ndị a ọtụtụ narị puku ndị ekwekọghị tent, Einav na ndị ọrụ ibe re-egosipụta amalite price na ikpeazụ price na okwu nke akwụkwọ uru nke ọ bụla ihe (eg, ná nkezi, ire ere price). Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na Taylormade burner 09 Driver nwere a akwụkwọ uru nke $ 100 (dabere na ya ahịa), mgbe ahụ, a na-amalite price nke $ 10 a ga-owụt dị ka 0,1 nakwa nke ikpeazụ price nke $ 120 a ga-owụt dị ka 1.2.
Ọgụgụ 2.6: Otu ihe atụ nke a ekwekọghị set. Nke a bụ kpọmkwem otu ihe ahụ golf club (a Taylormade burner 09 Driver) na-ere site kpọmkwem otu onye ( "budgetgolfer"), ma ụfọdụ n'ime ndị a ahịa a rụrụ ọrụ ebube dị iche iche ọnọdụ (eg, dị iche iche amalite price). Ọgụgụ e si Einav et al. (2015) .
Cheta na Einav na ibe nwere mmasị na mmetụta nke mmalite price on auction ga esi. Akpa, na-eji linear nlaghachi azụ ha mere atụmatụ na elu amalite ahịa ibelata gbasara nke puru omume a ire ere, na na elu amalite ahịa dịkwuo ikpeazụ ire ere price, keonodu on a ire ere aa. Site onwe ha, ndị a atụmatụ-nke na-averaged n'elu niile na ngwaahịa na iche a linear mmekọrịta dị n'etiti amalite price na nke ikpeazụ a ga esi-na-adịghị niile na-akpali. Ma, Einav na ibe-ejikwa oke ha hà data na-eme atụmatụ dị iche iche nke ndị na-apụtachaghị Nchoputa. Akpa, Einav na ndị ọrụ ibe mere ka ndị a kwuru iche iche maka ihe nke dị iche iche ahịa na-enweghị-eji linear nlaghachi azụ. Ha chọpụtara na mgbe na mmekọrịta dị n'etiti mmalite price na gbasara nke puru omume a ire bụ linear, mmekọrịta dị n'etiti amalite price na ire ere price bụ n'ụzọ doro anya na-abụghị linear (ọgụgụ 2,7). Karịsịa, maka mmalite ahịa n'etiti 0,05 na 0,85, na-amalite price nwere nnọọ nta mmetụta na ire ere price, a Inweta ahụ e dechara Agbaghara na analysis nke chere a linear mmekọrịta.
Chepụta 2,7: Mmekọrịta dị n'etiti auction mmalite price na gbasara nke puru omume a ire ere (ekpe panel) na ire ere price (nri panel). E nwere Olee ihe enyemaka a linear mmekọrịta dị n'etiti mmalite price na gbasara nke puru omume ire ere, ma na e nwere ndị na-abụghị linear mmekọrịta dị n'etiti mmalite price na ire ere price; maka mmalite ahịa n'etiti 0,05 na 0,85, na-amalite price nwere nnọọ nta mmetụta na ire ere price. N'ọnọdụ abụọ ahụ, na mmekọrịta ndị nwere ihu ọma onwe ha nke ihe uru. Ndị a grafụ mụta nwa Fig 4a na 4b Einav et al. (2015) .
Nke abụọ, kama nkezi n'elu ihe niile, Einav na ibe-ejikwa oke ọnụ ọgụgụ nke ha na data na-eme atụmatụ mmetụta nke malite price maka 23 dị iche iche ige nke ihe (eg, Pita onunu, ngwá electronic, na egwuregwu irighiri) (ọgụgụ 2.8). Ndị a atụmatụ e mere na-egosi na ihe pụrụ iche ihe-dị ka irighiri-mmalite price nwere a nta utịp ke gbasara nke puru omume nke a ire na a ibu utịp ke akpatre ire ere price. Ọzọkwa, n'ihi na ihe commodified ihe-dị ka DVD na video-na mmalite price nwere fọrọ nke nta ọ bụla mmetụta na ikpeazụ price. Ndị ọzọ okwu, nkezi na-agwakọta na-esi 23 dị iche iche ige nke ihe odịbe ozi dị mkpa banyere ọdịiche dị n'etiti ihe ndị a.
Chepụta 2.8: Results gosiri atụmatụ e mere si onye ọ bụla udi n'otu n'otu; siri ike ntụpọ na atụmatụ e mere ihe nile ige pooled ọnụ (Einav et al. 2015, Table 11) . Ndị a atụmatụ e mere na-egosi na ihe pụrụ iche ihe-dị ka irighiri-mmalite price nwere a nta utịp ke gbasara nke puru omume nke a ire ere (x-axis) na a ibu utịp ke akpatre ire ere price (y-axis).
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị ezigbo mmasị ná auctions on eBay, ị ga-enwe mmasị n'ụzọ Chọpụta 2.7 na Chọpụta 2.8-enye a baa ọgaranya nghọta nke eBay karịa mfe linear nlaghachi azụ kwuru na ọ iche linear mmekọrịta na ikpokọta ọtụtụ dị iche iche ige nke ihe. Ndị a ọzọ aghụghọ atụmatụ e mere na-egosi ike nke kenha na oke data; ndị a kwuru ihe napugh ime na-enweghị ihe buru oke ibu ọnụ ọgụgụ nke ubi nwere, nke gaara prohibitively oké ọnụ.
N'ezie, anyị kwesịrị inwe obere obi ike na ihe ọ bụla kenha ọmụmụ karịa ka anyị ga na-arụpụta nke a tụnyere nnwale. Mgbe adabere na ya pụta ọ bụla na kenha ọmụmụ, e nwere ihe abụọ dị mkpa na-akpata nchegbu. Nke mbụ, anyị ga-echeta na anyị nwere ike na-hụ ngosi atụnyere ihe ndị e ji mee ihe maka kenha. Ha isi results, Einav na ndị ọrụ ibe mere kpọmkwem kenha on anọ e ji mara:-ere ákwà nọmba NJ, ihe Atiya, ihe aha, na sobtaitel. Ọ bụrụ na ihe ndị dị iche iche na ụzọ a na-eji maka kenha, na ike ike mmegbu a tụnyere. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na "budgetgolfer" abuọ ọnu ahịa n'ihi na Taylormade burner 09 Driver oyi (mgbe osisi gọlfụ ndị na-erughị ewu ewu), mgbe ahụ, ọ nwere ike ịpụta na ala amalite ahịa iduga belata ikpeazụ ahịa, ọ bụ ezie na nke a ga-abụ ihe artifact nke n'oge a kara aka mgbanwe na ina. Ke ofụri ofụri, ihe kasị eme ka nsogbu a yiri ka a ga-agbalị ọtụtụ dị iche iche iche iche nke kenha. Dị ka ihe atụ, Einav na ndị ọrụ ibe ikwugharị ha analysis ebe ekwekọghị tent-agụnye ihe na-ere n'ime otu afọ, n'ime otu ọnwa, na contemporaneously. Eme oge window tighter mbelata ọnụ ọgụgụ nke ekwekọghị tent, ma na-ebelata nchegbu banyere n'oge a kara mgbanwe. Ọ dabara nke ọma, ha na-ahụ na-ewetara ha na-agbanweghi agbanwe site mgbanwe ndị a na kenha ibiere. Na kenha akwụkwọ, nke a na ụdị nchegbu a na-egosipụta na okwu nke observables na unobservables, ma isi ihe echiche bụ n'ezie na-eme nnyocha na-na-eke mma atụnyere na atụmatụ eji na kenha.
Nke abụọ nchegbu bụ isi mgbe na ikọ isi kenha pụta bụ na ha nanị emetụta ekwekọghị data; ha adịghị emetụta na ikpe na-apụghị ekwekọghị. Dị ka ihe atụ, site na ịmachi ha nnyocha iji ihe na nwere otutu Ndepụta Einav na ibe na-elekwasị anya ọkachamara na ọkara ọkachamara na-ere ákwà. N'ihi ya, mgbe akọwa ndị a atụnyere anyị aghaghị icheta na ha na-emetụta a subset nke eBay.
Kenha bụ ike atụmatụ maka achọta mma atụnyere na nnukwu datasets. Ka ọtụtụ na-elekọta mmadụ ndị ọkà mmụta sayensị, kenha ele ka nke abụọ-kasị mma nwere, ma nke a bu nke ekwere na a ga-adi, ubé. Kenha na oke data nwere ike ịdị mma karịa ole na ole nke ubi nwere mgbe: 1) heterogeneity na mmetụta dị mkpa na 2) e nwere ezi observables n'ihi kenha. Isiokwu 2.4 na-enye ụfọdụ ndị ọzọ ihe atụ nke otú kenha ike ga-eji na nnukwu data isi mmalite.
Isiokwu 2.4: Ihe Nlereanya nke ọmụmụ na-eji kenha ịchọta mma atụnyere n'ime digital metụtara.
Big data isi iyi
Mmetụta nke ịgba égbè na uwe ojii ime ihe ike Kwụsị-and-frisk ndekọ Legewie (2016)
Mmetụta nke September 11, 2001 on ezinụlọ na ndị agbata obi ịtụ vootu ndekọ na onyinye ndia Hersh (2013)
Social contagion Communication na ngwaahịa doo data Aral, Muchnik, and Sundararajan (2009)
Ná mmechi, ghọgbuo-abịaru nso ka estimating causal mmetụta si na-abụghị ibuo data dị ize ndụ. Otú ọ dị, atụmatụ dị iche iche nke na-eme causal atụmatụ dina, tinyere a continuum si sie ike na ka ike na-ekweghị, na-eme nnyocha nwere ike ịchọpụta mma atụnyere n'ime ndị na-abụghị ibuo data. The uto nke mgbe nile na-on, nnukwu data na usoro enwekwu anyị nwee ike n'ụzọ dị irè na-eji abụọ ẹdude ụzọ: eke nwere na kenha.